सरकारको नीति नै नियन्त्रण र हस्तक्षेपकारी :- डा डिला संग्रौला - Sabal Post
सरकारले निर्माण गर्ने नीति नियम, यसको कार्ययोजना र कारेको मर्गचित्रले मात्र हरेक क्षेत्रमा आर्थिक, सामाजिक,राजनीतिक, साँस्कृतिक पक्ष सुचारुरुपले सञ्चालित भई मुलुक अगाडि बढ्नुका साथै विकास पनि द्रुत गतिमा अगाडि बढ्न सक्दछ । आज दुई तिहाईको बलियो सरकार पनि छ तर यसले ल्याएका नीति नियम र विधेयकहरु संविधानत लोकतान्त्रिक विधि र पद्धति अनुरुपको विपरीत छन् । अलोकतान्त्रिक शैली, अनुत्तरदायीपूर्ण जिम्मेवारी गर्दा हरेक विधेयकको चुरो हस्ताक्षेप, नियन्त्रण र अधिनायकवादको गन्धबाट टाढा छैनन् ।
सबै शक्तिको केन्द्रिकृत गरी सुरुमा स्वयम् प्रधानमन्त्रीले सम्पत्ति सुद्धीकरण, राजश्व अनुसन्धान, महान्यायधिवक्तको कार्यालय आफ्नो मतहतमा राखेर शक्तिको प्रर्दशन गरी आफु शक्तिशाली भएको देखाउनु खोजे । सरकारको प्रमुख मुद्धाहरु शान्ति,समृद्धि, सुशासन र विकास थिएँ । यी तिनवटै सन्दर्भमा सरकारपूर्ण असफल भयो । संविधानको कार्यान्वयनमा पनि प्रतिवद्ध देखिएन । जुन कुरा यसको काम गराई र क्रियाकलापले देखाउन सकेन ।
अधिकारको बाँडफाँड, राज्यको तहगत संरचनाको निर्माण, कर्मचारीको समायोजन र उचित प्रवद्र्धन, अझै सबै प्रदेशमा राजधानीको टुंगो लगाउन सकेन ।संघीयता भनेको अधिकारको विकेन्द्रीकरण पनि हो तर प्रदेश र स्थानियलाई थोरै बजेट दिइने प्रवृत्तिले पनि यो कुराको पुष्टि गरेको छ । संविधान र न्यायापालिका माथि ठाडो हस्ताक्षेपकारी भूमिका खेल्यो । नेपालको संविधानमा संवैधानिक परिषदमा विपक्ष दलको नेताको उपस्थिति विना प्रमुख अयुक्ताहरुको नियुक्ति गर्नु शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त विपरीत न्यायापालिकालाई कार्यकारीको लाचारछायाँ बनाउनु जस्ता क्रियाकलापले सरकार संविधानको कार्यान्वयन प्रति पनि जिम्मेवार देखिएन ।
शान्ति सुरक्षा दिन सकेन, लामो समयसम्म निर्मलाले न्याय पाउन सकिनन् भने सुशासनको कुरा गर्ने हो भने सरकार संस्थागत भ्रष्टाचारमा लिप्त छ । प्रधानमन्त्रीको भनाइ भ्रष्टाचारलाई शून्य सहनशीलतामा पु¥याउने कुरा विपरीत सरकार विभिन्न भ्रष्टाचारको श्रृङ्खलावद्ध काण्डैकाण्डले मुछिएको छ । मुलुकको आर्थिक क्षेत्रलाई हेर्ने हो भने आर्थिक सूचांक त्यत्ति सन्तोषजनक छैनन् । सरकारले भर्खरै ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम सपनै सपना र बतासे अश्वासनले भरिएको बेलुन जस्तै देखिन्छ । यसका सिद्धान्त र प्राथमिकतामा पनि कुनै नौला छैनन् । पूरानै निरन्तरता र कर्मकाण्डी मात्र देखिन्छन् । अहिलेको अवस्थामा आउने हो भने लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यता, स्वतन्त्र न्यायापालिका, मानव अधिकार, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई कुल्चिदै यो सरकारले अधिनायकवाद मान्यतालाई गन्तव्य बनाएको कुरा यसको काम गराई र हिडाइले देखाइरहेको छ । यसको अर्को पाटो भनेको कानुनहरुको निर्माण गर्नु पनि हो तर जतिपनि विधेयकहरु आएका छन् सबै अधिकार केन्द्रमा राख्ने र प्रधानमन्त्री अझ शक्तिशाली बन्नेतर्फ उन्मुख देखिन्छन् ।
विगतमा आएको राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा सम्बन्धि विधेयक व्यपारी विचौलियहरुलाई पृष्ठपोषण हुने गरि ल्याईयो र डा. केसी सम्बन्धीको सम्झौता सरकारले आफै ग¥यो तोड्यो । अहिले आएका विधेयकहरुमामिडिया काउन्सिल र राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदको काम, कर्तव्य र अधिकार, मानव अधिकार र शिक्षा सम्बन्धि नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको सबै विधेयकलाई हेर्दा हस्ताक्षेप र नियन्त्रण गर्न खोजेको देखिन्छ ।
पहिलो विधेयक – मिडिया काउन्सिल – सरकारले मिडियामाथि नियमन गर्नका लागि सम्पूर्णरुपमा नियन्त्रित मिडिया काउन्सिल गठनको लागि यो विधेयक ल्याएको छ । यो नियन्त्रित समाजको निर्माणको चाहनाबाट प्रेरित छ । नेपालको संविधानमा पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रतालाई प्रस्तावनामा प्रस्टरुपले लिपीवद्ध गरिएको छ । यसको मुख्य उद्देश्य लोकतान्त्रिक, गणतन्त्राको सुरक्षा र संवद्र्धनका लागि प्रेस स्वतन्त्रता अपरिहार्य हुन्छ भन्ने हो । यही लोकतान्त्रिक संविधानलाई टेकेर सरकार बनाउने तर प्रेस स्वतन्त्रतालाई नियन्त्रण गर्न खोज्नु सरकारले असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक चरित्र प्रदर्शन गर्नु पनि हो ।
यो प्रेस स्वतन्त्रता लोकतन्त्रको आधार स्ताम्भ हो तर सरकार लोकतन्त्रको मुल्यमान्यता भत्काउँदै अधिनायकवाद तर्फ किन उन्मुख हुँदैछ । प्रस्तावित मिडिया काउन्सिल भित्र छिरेर प्रेस स्वतन्त्रता माथि आचारसंहिताको पालनको डण्डा चलाउन खोज्नु सरकारको निरंकुशताको पराकष्ठ नै हो । सरकारले नै काउन्सिल बनाउने तर मन परेन भने पदधिकारी हटाउने प्रावधानले सरकार प्रेसजगतलाई नियन्त्रण गर्न खोजेको प्रस्टै देखिन्छ । त्यसैले जहाँ लोकतन्त्र हुन्छ त्यहाँ पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता हुन्छ र पत्रकारले आफ्ना लागि आफै आचारसंहिता बनाउँदछन् तर जहाँ निरंकुशता हुुन्छ त्यहाँ प्रेसलाई नियन्त्रणकारी र अधिनायकवादी आचारसंहितामा ल्याउने गर्दछन् । त्यसैले यो विधेयक संविधानत र लोकतन्त्रको विरोधी छ ।
राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदको काम, कर्तव्य र अधिकार – राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदको काम, कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकलाई हेर्दा राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदलाई संविधनले प्रत्याभूत गरेको अधिकार हनन गरि परिषदलाई प्रधानमन्त्रीको लाचार छायाँ बनाउने प्रस्ताव गलत पनि छ । संविधानको धारा २६७उपधारा (६) मा सुरक्षा परिषदको सिफारिसमा नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषदको निर्णय बमोजिम राष्ट्रपतिबाट सेना परिचालनका घोषणा हुने छ । संविधानको प्रष्ट व्यवस्थाको उल्लंघनगरि प्रधानमन्त्रीको एकल निर्णयबाट सेना परिचलन गर्न मिल्ने गरि विधेयक प्रस्तावित गर्नु असंवैधानिक आपत्तिजनक छ ।
राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदमा प्रधानमन्त्री अलवा रक्षा, गृह, अर्थ र पराराष्ट्र मन्त्री, नेपाल सरकारका मुख्य सचिव एवं प्रधान सेनापति सदस्य रहने व्यवस्था छ । कुनै राष्ट्रिय संकट उत्पन्न हुँदा परिषदको बैठक बस्न नसक्ने परिस्थितिको परिकल्पना गर्न सकिन्न । यस्तो सुरक्षा परिषदको बैठक नबसि सेना परिचलन गर्न मिल्ने व्यवस्था गरिनु नेपाली सेनाको नेतृत्वलाई सरिक नगराई सेनाको प्रयोग आफैले गरिने प्रावधान राख्नु आफैमा राम्रो विषय होइन ।
मानव अधिकार आयोग २०६८ ऐन – यो विधेयक पनि संविधानको प्रावधान तथा व्यवस्था र मूल मर्म विपरीत सरकारले ल्याएको छ । प्रस्तावित विधेयकमा संविधानको मूलमर्म र भावनालाई कुचिल्दै यस ऐनको प्रस्तावनामा रहेको स्वयत्तत्ता र स्वतन्त्र शब्द हटाएर स्वतन्त्र संवैधानिक आयोगलाई महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय अन्र्तगत राख्न खोजिएको छ । जब सम्म मनाव अधिकार आयोगले निष्पक्ष र स्वतन्त्ररुपले काम गर्न पाउँदैन तब सम्म मानव अधिकारका घटनाहरु घटिनै रहन्छन् तर यसलाई पनि मतहतमा राखेर नियन्त्रण गर्न खोजिनु सर्वसत्तावादको खुला उपहास हो ।
शिक्षा सम्बन्धि केहि नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक – यो ऐन राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएको छ । यस विधेयकमा पनि विश्वविद्यालयमा राजनीतिक नेतृत्वलाई हावी बनाउने उद्देश्य राखि विश्वविद्यालयमा हस्ताक्षेपकारी नीति अनुरुप यो ल्याइएको छ । यस विधेयकमा विश्वविद्यालयमा प्रधानमन्त्री र शिक्षा मन्त्रीको भूमिका थप शक्तिशाली हुने व्यवस्था छ । विश्वविद्यालय स्वयत्ता संस्था हो । त्यसैले यो पूर्णरुपले स्वयत्त हुनुपर्दछ । पदाधिकारीको नियुक्ति देखि यसको सञ्चालन समेत स्वतन्त्र किसिमले हुन दिनुपर्दछ । कुनै हस्ताक्षेप गरिनुहुँदैन ।
यो विधेयकले विश्वविद्यालयको स्वयत्तत्ता र प्राज्ञीक स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित गरेको देखन्छि । प्राज्ञिकरुपमा स्वयत्तत्ता, स्वतन्त्रता र सिजर्ना ज्ञानको ढोका खोल्ने भनेको विश्वविद्यालय नै हो तर सरकारले यसलाई नियन्त्रण गर्न खोजेको हो । त्यसैले विश्वविद्यालयलाई चरम राजनीतिककरणमा धकेलेर, शिक्षा सचिव र सहसचिवलाई विश्वविद्यालयको जिम्मा दिने प्रवृतीको विकास सरकारले किन गर्न खोज्दैछ । विश्वविद्यालयमा सुधारको खाँचो छ नकि सरकारको राजनीतिक ठाडो हस्ताक्षेप । उच्च शिक्षालाई राजनीतिक बाट टाढा राख्न सक्नु पर्दछ । यस ऐनको धारा १९ को उपधारा (क) थपेर कुलपति,शिक्षाध्यक्ष, कुलसचिव र सेवाआयोग अध्यक्ष लगायतका पदाधिकारीले पदीय जिम्मेवारी, आचरण र इमानदारी पूरा नगरे पदबाट हटाउन सक्ने व्यवस्था छ ।
विश्वविद्यालयको मूल मर्म भनेको स्वयत्तत्ता हो तर हस्ताक्षेप गर्दै गए पछि शैक्षिक गुणस्तारमा ह्रास आउनुको साथै विश्वविद्यालय पनि सरकारको लाचारछायाँ बन्न पुग्दछ । उच्च स्तरीय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन लुकाएर ऐन संशोधन प्रस्ताव अघि बढाएको छ किन ? शिक्षा क्षेत्रलाई सहि मार्ग लैजान नियन्त्रणकारी विधेयक होइन सुधारात्मक मार्ग निर्देशन र शिक्षा नितिको आवश्यकता छ । यसरी सरकारले समृद्धि र विकास, यसको नीति, विधि, प्रवृद्धि र शैली हेर्ने हो भने दिन सक्दैन भन्ने कुरा प्रस्ट हुन्छ किनभने सरकारको शैली नै नियन्त्रण र हस्ताक्षेपकरी छ । त्यसैले समाजका सबै पक्ष जागरुक चेतनशील भई अर्को संघर्ष गर्नुको विकल्प छैन ।
ट्रम्पलाई महाअभियोगको सुनुवाइमा सहभागी हुन पत्राचार
नेपालीलाई कालापानी क्षेत्रसम्म आवतजावत गर्न भारतीय सुरक्षाकर्मीको…
भारतीय राजपत्रमा लिम्पियाधुरा नेपालकै रहेको तथ्य फेला
कृषि विकास बैंकद्धारा बेलहिया नाकामा सावुन पानिले…
गोठमा आगलागी, एक बालकको मृत्यु